Hadda waxaad ku badbaadin kartaa shaqooyinka muujiye daruurta | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Illustrator waxaa lagu cusbooneysiiyay dukumiintiyada Cloud iyo horumarin kale
Maalmahan aan joogsiga lahayn, Adobe sidoo kale wuxuu cusbooneysiiyay Sawirqaade waxa noqon lahaa isdhexgalka dukumiintiyada Cloud iyo taxane kale oo horumar ah oo aan faallo ka bixin doono.
Adobe oo cusbooneysiin ku sameynayay barnaamij kasta barnaamijyadeeda sidii ay ahaan jirtay in Camera Photoshop ama isku mid dhexgalka maqalka ee Adobe Stock; xiiso leh imaatinka si aad u hesho maktabad dhammaystiran oo maqal maqal ah in lagu dhex daro mashruucyada Premiere Pro.
Ku noqoshada Sawirqaade, qaabkan ugu dambeeyay wuxuu soo bandhigayaa dukumiintiyada Cloud iyo hagaajinta si loo hagaajiyo socodka shaqada. Waxaan ka hadleynaa otomaatig otomaatig ah si loola socdo nooca dukumiintiga si dukumiintiyada Cloud ay uga dhigaan la shaqeynta Sawirka mid sahlan oo ka gaar ah sidii hore.
Ku haysashada dukumiintiyada daruurta waxay ka dhigeysaa mid si cad u cadaynaysa sahlanaanta isticmaalka iska iloobi inaad ku kaydsato gudaha shaqooyinka. Oo ay ku jiraan waxa noqon lahaa taariikhda nooca taasna waxay noo oggolaanaysaa inaan calaamadeysano, raacno oo aan ku noqonno nooc kasta oo shaqada ah. Astaantan cusub ayaa lagu sii wanaajin doonaa iyadoo lala wadaagi karo dukumiintiyada dadka kale.
Si aad ugu raaxeysato dukumiintiyada Cloud wax aan ka badneyn waa inaad ku kaydisaa feyl ahaan dukumiinti daruur ah. Waxaan sidoo kale hada leenahay shiraac ka weyn: markii aad mashruuc cusub ka bilowdo goobaha dukumiintiga, shiraacku wuxuu si otomaatig ah u balaaraa cabirka marka cabirka dukumiintiga uu ka weyn yahay 227 inji.
Noocaan cusub weyso GPU-ga PC-gaaga si aad u bixiso sawirada sida aad u qaabaysay Tani waxay ka dhigan tahay in markii ikhtiyaarkan la hawlgeliyo, shayga loo bixiyo sidii aad u qaabaysay xitaa haddii aad codsatid wejiyada, saamaynta ama qaababka istaroogga.
Sidoo kale waxay ahaayeen oo ay ku jiraan hagaajinta jawaab celinta ay ka heleen bulshada hal abuurka ah sawir-qaadaha. Waxay yihiin guddiyada farshaxanka si loo jaro loona dhajiyo, daaqada cusub ee dukumiintiga ayaa 10 jeer ka dhaqso badan, waxaad kicin kartaa shuruucda dukumiintiyada badan markii aad keydinaysana feyl waxaa toos loogu sameeyaa meeshii ugu dambeysay ama galka muujiyeha asalka ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Adobe Illustrator waxaa lagu cusbooneysiiyay dukumiintiyada Cloud iyo horumarin kale
Adobe Stock Audio waa xaqiiqo sida ay ku dhawaaqday Adobe saacado ka hor